( မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် )
Pop ဂီတရဲ့ဘုရင် လို သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကရော ကွယ်လွန်ပြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာတဲ့အထိ တစ်ကမ္ဘာလုံးလက်ခံထားရလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ King of Pop ဆိုတဲ့ title ဟာ Micheal Joseph Jackson ဆိုတဲ့ Chicago မြိုကနေ ၂၅ မိုင်ပဲဝေးတဲ့ Gary မြိုသားလေးအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။
လက်ဝှေ့သမားဟောင်း စတီးကုမ္မဏီလုပ်သား ဒေသခံ R&B တီးဝိုင်းရဲ့ ဂစ်တာသမားဖြစ်သူ ဖခင် နဲ့ မိခင်တိုက Michael တို မောင်နှမ ၉ ယောက်ကို ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထက် အနုပညာ အမွေကိုပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာ မောင်နှမတွေအားလုံးအတွက်တော့ ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေလိုပါပဲ ။ ကျွန်တော်တိုကို Michael Jackson လိုပြောလိုက်တာနဲ့ တွဲမြင်မိတာက ညီမဖြစ်သူ Janet Jackson ဆိုပေမယ့် ကျန်မောင်နှမ ၇ ယောက်လုံးဟာလည်း သူ့ထက်သူလူစွမ်းကောင်းပြောရလောက်အောင် လက်စွမ်းထက်သူ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်ပါပဲ ။ ပြောချင်တာက ဒီလို ဂီတအနုပညာ ဇ မသေးတဲ့ မိသားစုမှာ ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင် သင်ယူလေ့လာစရာ အများကြီးရှိနိုင်သလို အသုံးမကျရင် ဆူမယ့်ဆဲမယ့်ထုမယ့်နှက်မယ့် သူတွေချည်းပဲနေမှာပါပဲ ။ အထူးသဖြင့်တော့ သူတိုဖခင်ကြီး Joe ပေါ့ ။ မောင်နှမတွေ သီချင်းဆို ရီဟာဆယ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်တွေ မကြာမကြာ ကုလားထိုင်မှာထိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်က ခါးပတ်ကိုကိုင်ပြီး နားထောင်နေတတ်ပါသတဲ့ ။ တော်ရင် တစ်မှတ် ညံ့ရင် ခါးပတ် ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ ။ အပြစ်ဒဏ်အခံရဆုံးကတော့ Michael ပဲထင်ပါရဲ့ ။ သူ့ငယ်ဘဝ ဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ဖိနှိပ်မှူတွေ ခံခဲ့ရတဲ့အပြင် အထီးကျန်မှူ နဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှူတွေ ရှိခဲ့တယ်လို တချိန်မှာ ထုတ်ပြောရတဲ့အထိ Michael ရုန်းကန်ခဲ့ရပုံပါပဲ ။ Michael တို ညီအကိုမောင်နှမတွေ အနုပညာအကြောင်းကိုသိချင်သူတွေကတော့ သူတိုရဲ့ band လေးဖြစ်တဲ့ The Jackson Five ( The Jackson ) ရဲ့အကြောင်းကိုရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ် ။
Michael ရဲ့ ရုန်းကန်ကြိုးစားခက်ခဲမှူတွေကို highlights ဖြစ်စေချင်လို အားလုံးသိပြီးသားလိုဖြစ်တဲ့ Michael ရဲ့အောင်မြင်မှူတွေ အကြောင်းကိုတော့ အနည်းငယ်ပဲဖော်ပြပါရစေ ။
အဲဒီလို မောင်နှမတွေနဲ့ ဂီတ ဘဝကိုစခဲ့တဲ့ Michael ဟာ အတော်ဆုံး ၊ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဆုတွေ အောင်မြင်မှူတွေ ရခဲ့သလို တစ်ဖက်မှာလည်း ထမင်းစားရေသောက်ကအစ သတင်းဆိုး၊သတင်းကောင်း ဒွန်တွဲပေါ်ထွက်တတ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် စလဘရတီဘဝကို ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလိုလို ခံလာခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ် ။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ မတော်တဆ နှာခေါင်းရိုးကျိုးရာလေးက နေစလိုက်တဲ့ မျက်နှာ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေက ၂၀၀၄/၅ အထိကို ၁၁ ကြိမ်နဲ့အထက်ရှိခဲ့ပြီး သီချင်းမဆို အသစ်မထွက်တဲ့ နှစ်တွေမှာတောင် ပွဲဆူသွားစေလောက်တဲ့ ခေါင်းစီးသီတင်းတွေမှာ Michael ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဂီတဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ပရက်စလေရဲ့ သမီး လီဆာ နဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အကွဲ အပြဲတွေ ကအစ ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းအကောင်းအဆိုး တရားစွဲဆိုမှူတွေ အဆုံး အနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျ အစုံနဲ့ ပြောမကုန်အောင်ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလို ဘဝလူနေမှူပြဿနာတွေ လူမှူရေး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရှုပ်အထွေးတွေ မနည်းမနော ခုချိန်ထိကိုမရှင်းနိုင်အောင်ရှိခဲ့ပေမယ့် ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Michael ကကျွန်တော်တိုကိုဘယ်တော့မှစိတ်မပျက်စေခဲ့ပါဘူး ။ သတင်းဆိုးတွေ နာမည်ထိခိုက်မှူတွေ တရစပ်ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာတောင် Michael ဟေ့လိုဆိုလိုက်တာနဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်ဟာ နာရီပိုင်းအတွင်းရောင်းကုန်သွားတဲ့အထိကို ပရိသတ်အပေါ် ဂီတနဲ့ပတ်သက်လျှင်တော့ လွမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သူတစ်ဦး ၊ We are the World လို Heal The World လို အနုပညာတွေကို ချန်ထားခဲ့သူတစ်ဦး ၊ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိကို ကမ္ဘာ့ဂီတက သတိတရရှိနေရမယ့်သူတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Michael က ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်မှာ ကျွန်တော်တိုကို ထာဝရခွဲခွါသွားခဲ့ပေမယ့် သူချန်ထားခဲ့တဲ့ သူကြိုးစားခဲ့တဲ့ အနုပညာတွေက ကမ္ဘာတည်သရွေ့ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမှာမို … Michael Jackson ဟာ ကျွန်တော်တိုကို အနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားခဲ့သူတစ်ဦး ပါပဲ ။
When we haveadream, we got to grab it and never let go....
We won't give up easily, we rise up.
We support, we click & we win.
San Zuren December 16, 2021 at 9:23 AM
The Victory Is Coming✊
Zin Mar Htwe December 17, 2021 at 12:35 AM
KhantGyi December 18, 2021 at 8:17 AM
Mj. ..make my childhood
Yamin December 19, 2021 at 12:44 AM
Mon mon December 19, 2021 at 1:59 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 2:56 AM
Thank you for sharing about MJ (King of POP).
He is one of my favourite Musician.
My Favourite MJ songs;
-They don’t care about us(မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးဆန္ဒပြကြတုန်းက ဒီသံစဥ်လေးနှင့်ဆိုကြသေးတယ်)
Khin pa pa htun March 7, 2022 at 5:29 AM